ဖောက်သည်ဆက်ဆံရေးစီမံခန့်ခွဲမှု၊ ဖောက်သည်ဒေတာပလပ်ဖောင်းများ၊ နှင့် ဒေတာထုတ်ကုန်များ၊ ဖြေရှင်းချက်များ၊ ကိရိယာများ၊ ဝန်ဆောင်မှုများ၊ ဗျူဟာများနှင့် လုပ်ငန်းရှင်များထံမှ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်များ Martech Zone. သန့်စင်ခြင်း၊ ထုတ်ယူခြင်း၊ အသွင်ပြောင်းခြင်း၊ တင်ခြင်းနှင့် ဖောက်သည်ရောင်းချမှုနှင့် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဒေတာကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းတို့ အပါအဝင်
ကြော်ငြာနည်းပညာ Analytics & စမ်းသပ်ခြင်း အကြောင်းအရာစျေးကွက် CRM နှင့်ဒေတာပလက်ဖောင်း အီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေးနှင့်လက်လီရောင်းချမှု အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက် ထွန်းသစ်စနည်းပညာ ဖြစ်ရပ်စျေးကွက် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်အရောင်းပြခန်းများ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးစာအုပ်များ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဖြစ်ရပ်များ စျေးကွက်ရှာဖွေရေး Infographics စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိရိယာများ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသင်တန်း Martech Zone App များ မိုဘိုင်းနှင့်တက်ဘလက်စျေးကွက် မိတ်ဖက် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေး အရောင်းစွမ်းအား Search ကိုစျေးကွက် လူမှုမီဒီယာစျေးကွက်
အသံထွက်- ပြည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံတွင်းမှ ဒေသခံစျေးကွက်သမားများအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သော စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာ
အင်္ဂါနေ့, မေလ 17, 2022 အင်္ဂါနေ့, မေလ 17, 2022 Douglas Karr
When it comes to digital marketing, local marketers have historically struggled to keep up. Even those who do experiment with social media, search, and digital advertising often fail to attain the same success that national marketers achieve. That’s because local marketers typically lack crucial ingredients — such as marketing expertise, data, time, or resources — for maximizingapositive return on their digital marketing investments. The marketing tools enjoyed by big brands just aren’t built for
Zero-Party၊ First-Party၊ Second-Party နှင့် Third-Party Data ဟူသည် အဘယ်နည်း။
There’sahealthy debate online between the needs of companies to improve their targeting with data and the rights of consumers to protect their personal data. My humble opinion is that companies have abused data for so many years that we’re seeingajustified backlash across the industry. While good brands have been highly responsible, bad brands have tainted the data marketing pool and we’re left with quiteachallenge: How do we optimize and
သောကြာနေ့, မေလ 6, 2022 သောကြာနေ့, မေလ 6, 2022 Douglas Karr
ရှုပ်ထွေးသော လုပ်ငန်းစဉ်ကို အသေးစိတ်ဖော်ပြရာတွင် စိတ်ကူးပုံဖော်ခြင်းမှာ မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။ နည်းပညာအသုံးချမှု အဆင့်တစ်ခုစီ၏ ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ကို ပေးဆောင်ရန် Gantt ဇယားပါသည့် ပရောဂျက်တစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အလားအလာရှိသူ သို့မဟုတ် ဖောက်သည်ထံ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားသော ဆက်သွယ်ရေးများကို ကျဆင်းစေသော စျေးကွက်ရှာဖွေရေး အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်မှု၊ အရောင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် စံအပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုများကို မြင်သာစေရန် အရောင်းလုပ်ငန်းစဉ် သို့မဟုတ် မြေပုံတစ်ခုမျှသာဖြစ်သည်။ သင့်ဖောက်သည်များ၏ ခရီးစဉ်များကို မြင်ယောင်ကြည့်ပါ… လုပ်ငန်းစဉ်အပေါ် မြင်နိုင်၊ မျှဝေရန်နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မှု
သင့်လိပ်စာစာအုပ်တွင် မရှိသော လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ဦးထံ ဆက်သွယ်ရန် အီးမေးလ်လိပ်စာကို အမှန်တကယ်ရယူရန် လိုအပ်သည့်အချိန်များရှိသည်။ ဥပမာ၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအီးမေးလ်လိပ်စာတစ်ခုတွင် LinkedIn အကောင့်တစ်ခုစာရင်းသွင်းထားသောလူမည်မျှရှိသည်ကို ကျွန်တော်အမြဲအံ့သြမိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ချိတ်ဆက်ထားသောကြောင့် ၎င်းတို့ကို ရှာဖွေကြည့်ကာ ၎င်းတို့အား အီးမေးလ်တစ်စောင် ပေးပို့ပါ... ထို့နောက် မည်သည့်တုံ့ပြန်မှုမှ မရပါ။ ဆိုရှယ်မီဒီယာဝဘ်ဆိုက်များမှတဆင့် တိုက်ရိုက်မက်ဆေ့ခ်ျအင်တာဖေ့စ်များအားလုံးကို ဖြတ်သန်းပြီး တုံ့ပြန်မှုအား ကျွန်ုပ်သွားပါမည်။